WARBIXIN: Todobada Danbi Ee Barcelona Gashay Xilli Ciyaareedkan Ee Keentay In Yar Iyo Weynba Ay Ciqaabaan | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWARBIXIN: Todobada Danbi Ee Barcelona Gashay Xilli Ciyaareedkan Ee Keentay In Yar Iyo Weynba Ay Ciqaabaan
WARBIXIN: Todobada Danbi Ee Barcelona Gashay Xilli Ciyaareedkan Ee Keentay In Yar Iyo Weynba Ay Ciqaabaan
February 22, 2021 Balaleti
Hal lug iyo bar ayay kala baxeen Champions League, 2-0 ayaa looga badiyay lugta hore ee semi-finalka Copa del Rey iyo La Liga oo ay ka quusteen, Barcelona ayaa gaartay halkii ugu hooseysay xilli ciyaareedkan.
Kooxda Ronaldo Koeman ayaa ku kacday todoba danbi oo waa weyn taasoo sabab u noqotay inay ciqaabtaan maraan.
Qaladaad shaqsi oo aan la cafin karin
Kubada cagta waa ciyaar qaladaad ka buuxo laakiin Barcelona qaladaadkeeda waxa uu noqday mid xad dhaaf ah. Lenglet wuxuu sameeyay qaladaad badan oo ay ku jirto labadii kulan ee ay la ciyaareen Cadiz. Inta badan ciyaartoyda kooxda ayaa sameeyay xilli ciyaareedkan qaladaad shaqsiyadeed xitaa kuwa ay kooxda ku tiirsan tahay sida Frenkie de Jong. Kuwa ugu qaladaadka xun waa Pique iyo Neto xitaa Araujo qaladaad ayuu sameeyay.
Goolka hortiisa xariif kuma ahan
Barca waxay u baahataa inay abuurto fursado xad dhaaf ah si ay u hesho goolal. Kuma jiraan xitaa kooxaha ugu sareeya ee xariifka ku ah goolka hortiisa. Kaliya tusaale waxaa kuugu filan kulankii Cadiz oo ay hal gool ku dhaliyeen 20 darbo.
Koornooyinka iyo laadka xorta ah kama faa’ideystaan
Barcelona xilli ciyaareedkan waxaa soo martay 242 koorno, waxayna ku heleen kaliya hal gool, iyadoo Martin Braithwaite uu ka dhaliyay Dynamo Keiv. Koornadaas waxaa soo tuuray Alena oo aan haatan kooxda joogin. Kooxda waxaa sidoo kale rigooryinka qasaariyay Messi, Griezmann, Braithwaite, Pjanic iyo Dembele. Kaliya waqti dhow ayuu Messi ku soo laabtay qaab ciyaareedkiisa fiican ee laadadka xorta ah.
Iskama celin karaan kooxaha waa weyn
Guusha kaliya ee weyn ee ay Barcelona gaartay xilli ciyaareedkan waxay ka gaareen kooxda dhibtooneysa ee Juventus, taas xitaa kama caawinin inay kaalinta koowaad uga soo baxaan group-kooda madaama Juve ay 3-0 kaga badisay Barca kulankii Camp Nou. Waxay guuldarro ka soo gaartay Real Madrid (3-1), Atletico (1-0), Bilbao (3-2) finalkii Spanish Super Cup final, Sevilla (2-0) lugtii hore ee semi-finalka Copa del Rey iyo PSG (4-1) kulankii Champions League ee Camp Nou.
Kooxaha yaryarna kama adka
Qaar ka mid ah natiijooyinka ugu xun ee Barcelona waxay ka yimaadeen kooxaha yaryar. Guuldarooyin ayay kala kulmeen Getafe (1-0) iyo Cadiz (2-1), barbaro ayay kala kulmeen Alaves (1-1), Eibar (1-1) iyo Cadiz mar kale.
Shabaqooda goolal kama celin karaan
Waxay kaliya ku guuleysteen inay shabaqa ilaashadaan seddex meelood meel ahaan kulamadii ay ciyaareen, 12 kulan oo kaliya ay shabaqa ilaashadeen iyagoo dheelay 36 kulan. Waxaa shabaqa laga soo taabtay sideedii kulan ee ugu danbeysay. Markii ugu danbeysay ee Ter Stegen uu shabaqa ilaashado waxay aheyd kulankii Elche ee bishii Janaayo.
Hogaan ma ceshan karaan
Barcelona waxay dhumisay labo dhibcood kale sababtoo ah ma awoodaan inay hogaan ceshtaan. Ma ahan markii ugu horeysay ee sidaan ay ku dhacdo. Waxaa la qaaday koobka Spansih Super Cup ka dib waqtigii geeriga uu gool dhaliyay Asier Villalibre. Valencia ayaa iyadana barbareysay Barca oo hogaanka heysay. Madrid sidaas si la mid ah ayaa sameysay kulankii Clasico halka Cadiz kulankoodii hore ay guul soo laabasho ah ka gaareen Barca.